Demiryolunun Küresel Devleri Eskişehir’e Geliyor – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirShirkadaha caalamiga ah ee tareenka waxay ku soo socdaan Eskisehir
10 / 12 / 2019 26 Eskisehir, tareenka, hawlaha, GUUD, Headline, TURKEY
Kooxda tareenka ee Eskisehir taga
Gawaarida Caalamiga ee Wadada tareenka ayaa u socda Eskişehir; Waxaa abaabulay Modem Fuarcılık iyadoo la kaashanayo Wasaaradda Gadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Bandhiga Wershadaha Tareenka Bandhigga Kaabayaasha Wershadaha Tareenka iyo Teknolojiyada ayaa isu keenaya wadarta tirada 500 bilyan euro ee loo yaqaanno wadada tareenka ee suuqa caalamiga ah oo ay la wadaagaan warshadleyda maxalliga ah ee Eskişehir.
Xisaabinta ayaa loo bilaabay Bandhiga Wershadaha Tareenka, Kaabayaasha Warshadaha Tareenka iyo Bandhiga Teknolojiyada, oo ujeedadiisu tahay in la isu keeno wakiilada dadweynaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee warshadaha tareenka caalamiga ah. 14-16 waxaa loo habeeyey iyada oo la kaashanayo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Abril 2020 iyada oo lala kaashanayo hay'adda Bandhigga Casriga ah. Maamulka Eskişehir, TCDD Transportation Inc., Rugta Wershadaha ee Ankara; Rugta Ganacsiga Eskişehir, Eskişehir Rugta Wershadaha, Eskişehir OSB, TMMOB Rugta Injineeriyada Korantada Eskişehir Laanta, DTD Railway Association, iyo Ururka Nidaamka Tareenka ayaa ka mid ah hay'adaha taageera munaasabadda.
15 100 Shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye ee dalka ka yimid, 3 ayaa lagu qaban doonaa iyada oo ay ka qaybgalayaan in kabadan kun qof oo soo booqanaya, carwada ayaa aasaas u noqon doonta sameynta xiriirada ganacsi ee cusub iyo horumarinta xiriirka jira. Ciyaartoyda hormuudka ka ah qaybta leh saamiyada suuqa adduunka ee 500 bilyan euro waxay ka qeyb qaadan doonaan carwada. shirkadaha Turkey oo dunida ka mid ah kaabayaasha, superstructure, technology, ammaanka, electrification, seylaanyenta iyo IT noqon doonaa saarayaasha nidaamka tareenka fudud, iyo sidoo kale Rail Industry Show ee isgaarsiinta.
Mashaariicda ayaa la kulmi doona maal-galiyayaal Maalin uun ka hor carwada, 13 waxay martigelin doontaa shir maal-gashadayaasha maalgashiga tareenka iyo milkiilayaasha mashruuca bisha Abriil. Mashaariicda, moodellada maalgelinta iyo ilaha ayaa lagaga wada hadli doonaa baaxadda shirka. Shirka ayaa waxaa ka mid noqon doona bangiyada, maareeyayaasha lacagta, wakiilada dowladaha hoose iyo kuwa shisheeye, dowladaha hoose, la tashiga mashruuca, caymiska iyo shirkadaha sharciga. Sida ku xusan dalabka, shirarka-hal-ka-wada-shaqeyn ayaa sidoo kale la abaabuli doonaa. Shirka kadib, aqoon-isweydaarsi gooni gooni ah ayaa lagu qabanayaa iyadoo cadaaladdu halkaas kahadlayso mowduucyo gaar ah oo waaxdana laga wada hadli doono.
Teknolojiyada, cilmiga farsamada iyo warshadaha 4.0 waxaa ka doodi doona khubaradu inta lagu gudajiro shirarka la qaban doono inta carwadu socoto. horumarinta xadiidka tareenka ee Turkey, ka mid ah arrimaha la qiimeeyo oo diirada 2023 u baahan yahay in la sameeyo, in loo diyaar garoobo degmooyinka ku qariyeen by a maalgelin oo kala duwan Wadohoose guddi.
Saldhig guri Eskisehir
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Eskişehir Metin Güler ayaa sheegay in carwadu ay muhiimad weyn u leedahay Eskişehir. Wasaaradda Horumarinta waxay na siisay taageerada ugu weyn ee loogu talagalay magaalo Anatolian ah. Ku biirinta awoodda ololaynta ee tareenka, duulista iyo kooxaha ceramiga ayaa ah bartilmaameedka ugu muhiimsan ee warshadaha caddaaladda in laga sameeyo Eskişehir. qandaraasle ayaa ku hogaamiyay dalkeena galay warshadaha casriga ah iyo-warshadaha sub, qaanuunka ganacsiga Eskişehir'deyken dhibic hal of isgoyska of tareenka ee Turkey si dabiici ah noo gobolka. "
Gobolku istiraatiijiyad ahaan ayuu muhiim u yahay
Moris Revah, Maareeyaha Guud ee Farsamada Casriga ah, wuxuu sheegay inay ujeedadoodu tahay inay shaqo wanaagsan ka qabtaan Kaabayaasha Wershadaha Tareenka iyo Bandhigyada Teknolojiyada. Revah wuxuu yidhi, kapsamında Marka loo eego baaxadda ururkan muhiimka ah, maahan carwadda oo keliya, laakiin sidoo kale shirar iyo munaasabado kaladuwan ayaa dhici doona. Gaar ahaan, maalinta ka horreysa in carwadu furmaan, waxaan abaabulnaa shir aad u culus oo lala yeesho khubaro ku xeel dheer arrimaha maaliyadda tareenka. Maal-gashadayaasha, oo iyagu ah bilowga lacagta waddooyinka tareennada laga dhigo tiro caalami ah, ayaa imaan doona waddankeenna. Dadkani waxay awoodi doonaan inay si toos ah ula xiriiraan shirkadaha ka dib shirka.
Ayada oo carabka ku adkeysay in qodobka ugu muhiimsan ee horumarka dalka ay tahay shabakadda tareenka, Revah ayaa tiri: “Nidaamka tareenka ma ahan kaliya yareynta taraafikada waddooyinka laakiin sidoo kale qaab gaadiid oo wax ku ool ah. Waxaad ku ridi kartaa ugu badnaan tan tan tan 25 tan TIR, laakiin waxa kaliya oo suurtagal ah in lagu ridayo tan 60 tan gaari-waran. Marka gaari xNUMX uu saaran yahay tareenka, koontada ayaa iska cad. Intaa waxaa dheer, gaadiidka xadiidka waxay ka yar yihiin 50 dhinaca badda iyo 60 iyadoo wadooyinka ay ka jaban yihiin Dünya (World)
Kooxda Adduunka waxaa yaacaya loo leeyahay tareenka ee Turkey
Kooxaha adduunka oo isku diyaarinaya Kanal Istanbul
Rafiiqayaasha Aasiya ayaa astaan ​​u noqon doona Bandhigga Caalamiga ah ee 'mzmir'
Tareenka ugu wayni waa soo socdaa
Qeybta tareenka ee Istanbul-Eskişehir ee degmada Geyve ee Orencik waxaa dhaawacmey qeybta…
Ogeysiiska Udir: Baaxadda Shaqooyinka Dhulka Hoostiisa mara ee Eskişehir Garda Railway…
Shirkadda TÜLOMSAŞ Global Company
Ogeysiiska Qandaraaska: Iibsiga Qaybaha Guud (TÜVASAŞ)
Dunida Turkigu waxay noqon kartaa bartamaha dhaqaalaha adduunka
Hill International ee "FIDIC Global Workshop Bariga Dhexe"
Kobcitaanka suuqa caalamiga ah ee tareenka
Rafiiqayaasha Caalamiga ah ee Tareenka